Maamulihii hore ee kastamka Berbera Mohamed Abdi Gurxan oo la filayo in loo magacaabo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda. W/Q Rakad Mxd Sultan | Saxil News Network
Maamulihii hore ee kastamka Berbera Mohamed Abdi Gurxan oo la filayo in loo magacaabo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda. W/Q Rakad Mxd Sultan
Berbera (Saxilnews.com)-Maamulihii hore ee kastamka Berbera Mohamed Abdi Gurxan oo la filayo in loo magacaabo Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda.
Mohamed Gurhan waa maamulihii hore ee Kastamka Berbera, waanna mid ka mida maamulayaashii ugu aqoonta iyo kartida badnaa ee soo mara kastamka Berbera.
Runtii Gurxan wuxuu ahaa maamule kastam maamulihii ugu mudnaa ee aan arko waxaannu wakhtigiisa iyo aqoontiisaba galiyay inuu kor u qaado dakhliga Wasaaradda maaliyadda ee Berbera, wuxuu ahaa maamule dhallinyaro ah oo saacadkasta oo shaqadu socoto dhex fadhiya xafiiskiisa oo aanad mar kaliya ka waayayn, hawlkastanna ku xaliya xafiiskiisa.
Gurxan wuxuu ka mid ahaa aqoonyahankii ugu sarreeyay jaamacadda Hargeysa wakhtigii uu qalinjabinayay isagoo wasaarada maaliyada kala soo shaqeeyay waaxyo kala duwan.
Aqoon, akhlaaq, dabeecad, dadnimo, diin intuba waa wehelkiisa koobaad, waxaanad markasta ku dhex arkaysaa safka hore ee masjidka isagoo habeenkii Akhrisanaya Kitaabka Alle iyo dhigashada duruusta ka socota masaajiddada Berbera, waxaanad jeclaanaysaa qaab fikirkiisa iyo aqoonta uu u leeyahay maamul iyo nidaam dawladnimo.
Wakhtiyaddii uu firaaqadda heli jiray wuxuu aqoontiisa uga faa’iideyn jiray Ardayda dugsiyadda sare iyo jaamacaddaha, wuxuuna si gaara u taageeri jiray dhallinyarada isagoo guno u qoray kooxdii kubada cagta ee Kastamka Berbera oo ahaa kuwii keenay Guushii kubada ee Gobolka saaxil, Mararka aan la kaftamayo waxaan ku odhan jiray niyaw madexweyne yaa nooga kaa dhiga.
Gurxan waa la tabbi doonnaa waxaanna tabi doonna shaqaalihii, shaqadii iyo gobolkiiba, waxaannu noqon doonnaa maamule in badan la xasuusto shaqo wanaagiisii iyo horumarkii uu ka sammeeyay shaqada, isagoo hormuud ka ahaa in nidaam shaqo oo Casriya uu u sammeeyo Kastamka.
Waxaan ku hambalyaynayaa dedaalkiisii iyo gudashaddii waajibaadkiisii shaqo oo ay astaan u ahayd daacadnimo iyo diin.